လင်းသန့်| February 1, 2013 | Hits:7,690
ကိုရဲ February 1, 2013 - 4:32 pm အမေစုသုံးချင်တဲ့ဘားမားဆိုတဲ့အသုံးကိုကျနော်လဲဗမာတစ်ယောက်အနေနဲ့သဘောကျပါတယ် ဘားမားလို့သုံးခြင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအတိုင်းဖော်ပြရင် ဒုတိယနေရာမို့ ကုလသမဂ္ဂ မှာ နိုင်ငံအမည်စဉ်မယ်ဆိုရင် ရှေ့ကိုပြန်ရောက်သွားမှာပါ။ဒါဟာလွှတ်တော်အတွင်းမှာမဲခွဲ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်တစ်ခုပြောစရာရှိတာ လက်နက်ကိုင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေက ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးနေလို့သူတို့လက်နက်ကိုင်နေရတာပါဆိုတာမျိုးပြောနေတာကိုလဲ သတိမူသင့်ပါတယ်။ဘားမားဆိုရင်ဗမာကိုကိုယ်စားပြုရာရောက်လို့အခြားတိုင်းရင်းသားတွေ ကျေနပ်ပါ့မလား.။ဗမာဖြစ်တဲ့ကျနော်ကတော့လုံးဝထောက်ခံတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံကြီးထပ်ရေးဆွဲ ဖို့အတွက် နောက်ထပ်အချိန်တွေအများကြီးယူမယ်ဆိုရင် ရှေ့မတိုးပဲဖြစ်မှာကိုလဲ သတိပြု စေချင်ပါတယ်။ ကောင်းတာတွေလုပ်တာမှန်သမျှထောက်ခံပါတယ်။
Reply ရာဇာ February 1, 2013 - 5:11 pm ဒါဆိုရင် တော့ အန်တီစု အိမ်ပြန်ပြီး စိတ်ချ လက်ချသာ အိပ်ပြီး အနားယူပေတော့ ဗျား….ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အခုစစ်သားတွေက တယောက်မှ သတ္တိ မရှိကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား…..ရှိတဲ့ သတ္တိကလဲ လက်နက်မရှိတဲ့ သူကို သေနပ်နဲ့ ပစ်ရဲတဲ့ သတ္တိ တခုဘဲ…..
Reply moejoo February 7, 2013 - 1:51 pm ရာထူးကြီးလာလေသတ္တိမရှိလေပါပဲ။သေစ၇ာ၇ှိရဲဘော်တွေပဲပေးသေမှာပါ…..
Reply ပါကြီးဖိုး February 1, 2013 - 11:06 pm Burma ဆိုတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ အမည်ဖြစ်တာကြောင့် အသားကျ အကျွမ်းဝင်ပြီးသား အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတော်များများရဲ့ ဘာသာစကားအမည်၊ နိုင်ငံအမည်တွေမှာ သူတို့လူမျိုးတွေသုံးတဲ့ စာလုံးပေါင်းနဲ့အသံဟာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ စာလုံးပေါင်း၊ အသံတွေနဲ့ ကွဲလွဲနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်….Sweden, Swedish(အင်္ဂလိပ်လိုအသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံအမည်နဲ့ဘာသာစကားအမည်)။
Reply မင်းကြီးညို February 1, 2013 - 11:55 pm တပ်မတော်သားတွေကို စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်၊ အုပ်စုကွဲအောင် ဆုံးဖြတ်ရခက်အောင် သတ္တိရှိ
Reply အပြင်လူ February 2, 2013 - 8:36 pm အေးပါကွာ၊ မင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း – အားနည်းချက်များရှိနေသည့် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးသတ္တိရှိသည့် စစ်သားကောင်းများ၊ အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုကို တောင့်တ၍ ပြောဆိုရဲ့သည့် သတ္တိရှိသာ စစ်သားကောင်းများ လိုအပ်သည်။ (သို့မဟုတ်) တပ်မတော်သားများ၏ အကူအညီ လိုအပ်သည် – လို့ ပြောပေးရင် ကြေနပ်မှာလား။
Reply Linyone February 2, 2013 - 1:03 am Everyone who is in the Hlutdaws must have the right mindset to rebuild our Union. Makingabeautiful history is everyone’s duty including all the citizens. All of us from inside and outside the country need to contribute whatever we can to participate is essential. Lets do it.
Reply ကောင်းစေချင် February 2, 2013 - 7:42 am ကုလမှာ နံမည်ရှေ့ပိုင်းရောက်တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ရှေ့ရောက်မှကောင်းမယ်ဆို နံမည်ကို
Reply Shwe Linyone February 2, 2013 - 1:12 pm I wish I can turn the clock backward and restart again from January 1, 1947. If I were able to do that, the first thing I would do might be to stop Aung San from inviting the ethnic leaders for Panglong Conference which brought too much troubles to the ethnics. Without Panglong Agreement, we would need to do nothing with the cheaters. Galone U Saw assassinated Aung Sanalittle too late. If he killed him before 1947, there would not be Panglong Agreement, and we would not need to deal with these deceitful foxes.
Reply pps၁၂၃၄၅ February 2, 2013 - 11:04 pm ကိုရွှေလင်းယုန်
Reply ဗမာ February 2, 2013 - 7:18 pm စစ်သားတွေထဲမှာ အမေရိကရောက်နေတဲ့ ကိုမျိုးမြင့်ကိုလေးစားသလို၊ စစ်ဗိုလ်တွေထဲမှာ ဗိုလ်ကြီးဟောင်းကိုနေမျိုးဇင်ကိုလေးစားမိပါတယ်။ အဲဒီလိုစစ်သား၊ စစ်ဗိုလ်တွေ ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာ ထက်ဝက်လောက်ပဲရှိနေပါစေ မြန်မာပြည်တိုးတက်တာကြာလှပေါ့ဗျာ။
Reply နတ်ဆိုး (Russia ) February 3, 2013 - 4:35 pm တပ်မတော်သား အားလုံးသည် သတ္တိ ရှိပြီးသားပါဗျာ၊
Reply Thet Aung February 8, 2013 - 9:00 pm ကိုယ့်ကိုကိုယ် လူတိုင်းရဲ့ ဖအေ၊ မအေလို့ အထင်ရောက်နေတဲ့ အရူးတွေရဲ့ဒုက္ခကလည်း မသေးပါလား… အဲ့ဒီ အထင်တွေ၊ ဘ၀င်တွေနဲ့ကယ်တင်ခဲ့လို့ တိုင်းပြည်လည်း လက်နှီးစုပ်ဘ၀ဖြစ်နေပြီ မောင်ရင်တို့….